Ndị Castañar del Tiemblo na Castilla y León | Akụkọ Njem
Anyị nọ n'etiti oge opupu ihe ubi ma ụwa dum amalite chọta ebe to soro, oghere ndị mara mma nke mara mma nke ị kwesịrị ịma. Ebe ọ bụ na e nwekwara ụfọdụ àkwà mmiri tupu ezumike ahụ, anyị nwere ike iwepụta oge iji gaa ebe ndị dị ka Castañar del Tiemblo, mpaghara echedoro na Castilla y León.
El Castañar del Tiemblo bụ oke ohia mara mma nke a na-agakarị na mgbụsị akwụkwọ, n'ihi na agba nke oge mgbụsị akwụkwọ na-eme ka ihe niile ghọọ ụda olu na-ekpo ọkụ nke na -emepụta eserese kwesịrị ịhụ. Mana ọ bụrụ n’achọghị ichere ịhụ ebe a, ị nwekwara ike ịga n’oge opupu ihe ubi, oge mgbe oke ọhịa dị n’ịma mma ya niile, nwee ọtụtụ ndụ, ọ bụ ezie na ọ nwere ike ọ bụghị nnukwu amara ọ nwere n’oge mgbụsị akwụkwọ.
1 Na-ama jijiji
2 Ozi banyere Castañar del Tiemblo
3 Ntughari uzo di na nkpuru obi
Castañar del Tiemblo dị na ọnụ ọgụgụ El Tiemblo n'ógbè ofvila. Ugwu a bụ naanị kilomita 90 site na obodo na 46 kilomita site na Ávila. Osisi obi dị n'ime Iruelas Valley Natural Reserve, nke dị na Central System. Ebe a dị ezigbo mkpa, ebe ọ bụ ebe nchekwa maka nnụnụ. N’etiti ụdị ndị dị ebe ahụ, Black Vork na Ugo nke Imperial na-apụta. N'ime nchekwa enwere ọtụtụ ụdị ndị ọzọ, dịka Griffon Vulture, Golden Eagle, Roe Deer, Wildcat ma ọ bụ Gineta. N'ime ndepụta nke flora anyị nwere ike ịchọta Silvestre Pine, Peonies, Holly, Chestnut ma ọ bụ Yew.
Iji rute n'oko osisi chestnut anyị ga-etinye GPS iji rute n'obodo El Tiemblo. Ozugbo ị nọ n'obodo ahụ, ị ​​ga-agarịrị n'okporo ụzọ anyị banyere wee tụgharịa aka nri mgbe ị na-agafe ọdụ gas, na-arịgo site na mpaghara ahụ, anyị ga-ahụ ebe nnweta ebe a na-echekwa ebe ha ga-agwa anyị ihe niile na ọnụego dabara n'oge ahụ. . Mgbe ị banyere, ị ghaghị njem a track nke ọtụtụ kilomita na a na-kwụrụ na nke mbụ kilomita O nweghi ezigbo onodu maka ugbo ala mana odi ogologo njem iji mee ya n’ukwu ma oburu na anyi adighi adi ya, nihi na emesia anyi aghaghi ileta ogba nkpuru obi. Na mgbakwunye, n'oge mgbụsị akwụkwọ, ha na-enye ohere nke ịnakọta chestnuts.
Ozi banyere Castañar del Tiemblo
Nke a bụ ebe nchekwa eke na anyị ga-eburu n'uche na enwere ọnwa mgbe mbubata buru ibu, ọkachasị n'oge mgbụsị akwụkwọ, yabụ ọ bụ maka n’oge ụfọdụ, ha na-akwụ ụgwọ tiketi. Ha anaghị eme ya oge niile, yabụ na anyị ga-ebu ụzọ chọpụta ọnlaịnụ ihe ọnụego ndoputa bụ oge niile. Buru n'uche na ha na-akwụ ụgwọ maka ụgbọ ala na onye ọ bụla, ọbụlagodi mgbe ụfọdụ ma ọ bụrụ na ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-abanye, mana ọ dabere na oge na nsị ahụ, n'ihi ya ọ na-agbanwe agbanwe. Ke ofụri ofụri, udu nwere ike si abụọ euro onye ọ bụla na isii euro kwa ụgbọ ala. Nke ahụ bụ, n'ụgbọala ha na-ana onye ọ bụla ụgwọ yana ọnụ ụzọ ụgbọ ala ahụ, yabụ enwere ndị na-eche na ọ nwere ike ịdị oke ọnụ n'echiche a. Dị ka anyị na-ekwu, mgbanwe a na ị ga-enyocha ya kwa afọ iji jide n'aka na ihe tiketi akwụ ụgwọ.
Ntughari uzo di na nkpuru obi
Mgbe ị na-eleta Castañar del Tiemblo anyị na-amalite ụzọ na mpaghara ntụrụndụ nke El Regajo, nke bụ ebe ebe ọdụ ụgbọ ala dị. Ọ bụ ụzọ dị mfe nke dị okirikiri nke enwere ike ịme nwayọ dị ka ezinụlọ. Site na nke a ị na-aga na Refuge Majalavilla, na-agafe akwa mmiri. Ebe mgbaba a nwere osisi na-eto eto na osisi pine. Anyị na-agbaso ụzọ ahụ wee rute El Abuelo Chestnut. Osisi chestnut a bụ ihe kachasị ochie n'ime ọhịa na nke kachasị baa uru, dị ezigbo mkpa na isi ihe na-adọrọ mmasị na nleta. Ọ dị mita iri abụọ na ise n’ogologo, na ọkara ya dị ihe dị ka mita ise na otu narị afọ na ise.
Mgbe osisi a ma ama nke osisi ahụ, ụzọ ahụ na-aga n'ihu na-agafe iyi ruo mgbe ọ ruru ala ahịhịa nke Garganta de la Yedra. Ọ bụ ebe mara mma nke ukwuu nke ndị ọbịa na-anọdụ ala iji zuo ike mgbe ha gagharịchara, ọkachasị ebe ọ bụ na ezinụlọ nwere ụmụaka na-emekarị ka ụzọ ahụ gafere. Ọ bụ site na nke a ka ịlaghachi na mpaghara egwuregwu El Regajo na-amalite. Oge ikpeazụ a nke Garganta de la Yedra bụ ihe ọzọ kachasị mma nke oke ọhịa, ebe anyị nwere ebe dị mma iji kwụsị tupu anyị alaghachi.
Thewa niile na-atụ aro ka a mee ụzọ ahụ n'oge mgbụsị akwụkwọ, n’ihi na ọ bụ oge mgbe akwụkwọ ahụ dara na osisi ndị nwere ndo dị iche iche na-ejupụta ihe niile nwere agba mara mma. Ihe ọghọm nke a bụ na n'oge a na mgbe enwere akwa mmiri na ezumike, ọ juputara na ndị mmadụ, yabụ na ọ naghị adị jụụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » España » Ndị Castañar del Tiemblo na Castilla y León